कोभिड – १९ः आत्तिनु र मात्तिनु हुन्न ! | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७७ कार्तिक १६ गते ०७:२८
आजकल मानिसहरूलाई कोभिडका कुरा सुन्दासुन्दा वाक्क लाग्न थालिसकेको छ । पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी, अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल जताततै कोभिडकै कुरा छन् । त्यसमा पनि मैले थप्दा मानिसलाई रुची नलाग्न पनि सक्छ । कसैलाई रुची लागे पनि नलागेपनि अलिकति अनुभव साट्न खोजेको हुँ । पढ्नका लागि कसैलाई जबरजस्ती छैन । पढेर प्रतिक्रिया दिनु भयो भने आभारी हुनेछु ।
सन् २०१९ को डिसेम्बरबाट देखिएको काभिड–१९ नामक भाइरस अहिले विश्वका प्राय सबै देशमा फैलिएको छ । त्यसयता विश्वमा कोभिड–१९ को एक किसिमको आतङ्क छ । धनी कहलिएका मुलुकदेखि गरिबीको रेखामुनी रहेका जुनकुनै मुलुक पनि कोभिड सङ्क्रमणको सन्त्रासबाट सायदै मुक्त होलान् । यो आलेख तयार पार्दासम्म विश्वमा ४ करोड ६४ लाखभन्दा बढीमा सङ्क्रमण देखा परेकोमा १२ लाखभन्दा बढी सङ्क्रमितको मृत्यु भएको वल्डोमिटरले जनाएको छ । झण्डै साढे ३ करोड सङ्क्रमित निको भइसकेका छन् । नेपालमा मात्रै १ लाख ७३ हजार सङ्क्रमित भएका र १ लाख ३४ हजार निको भइसकेका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ९ सय ६० पुगेको छ । (२०७७ कात्तिक १६ गते) कोभिड –१९ का बारेमा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक भ्रम र केही यथार्थ पढ्न पाइन्छ । कुन सही हो र कुन गलत हो सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई खुट्याउन नै समस्या छ । मैले यसअघि नै कुनै एक अनलाइनमा कोरोनाः सञ्चारकै सन्त्रास ज्यादा शीर्षकमा एउटा लेख प्रकाशन गरेको थिएँ । म आफैँ सङ्क्रमित हुँदा पनि यसैमा अडिग छु ।
चिनबाट सुरू यो माहामारी घुमीफिरी चिनको छिमेकसम्म मात्रै आइपुगेन मेरो घरैमा आइपुग्यो । तर, यो मेरो घरसम्म आइपुग्दा म मानसिक रूपमा कुनै पनि बेला आइपुग्छ भनेर ‘फेस’ गर्न तम्तयार भइसकेको थिएँ । र, यसलाई सहजै शरीरमा स्वीकार पनि गरेँ । मेरो विचारमा यो अरुकोमा छँदा भयङ्कर भन्ने र आफ्नोमा आइलागेपछि सहज स्वीकार्ने हो भने जित्न सहज हुन्छ । हुन त मेरो नेगेटिभ रिपोर्ट आइसकेको छैन तर पनि मैले कोभिडमाथि यही दशैँताक विजयी हासिल गरिसकेको छु । यसको औपचारिक नतिजा आउनका लागि स्वाब दिन भने बाँकी छ ।
सबैभन्दा पहिला मेरो शरीरमा कोभिड–१९ का भाइरस कसरी प्रवेश गर्यो होला भन्ने अनुमान तिर लागौँ । (यकिन गर्न त सकिँदैन) गत भदौ २८ गते घरभित्रै सामान्य दुर्घटना हुँदा मेरो देब्रे गोडा भाँचिन पुग्यो । लगत्तै मेरो गोडामा प्लाष्टर गरियो । त्यस यताका एक महिनाभन्दा बढी समय बैशाखीका भरमा चल्यो । साप्ताहिक रूपमा अस्पताल आउजाउ गर्नुपथ्र्यो । कहिले साहिला दाइ त कहिले ठुल्दाइसँग अस्पताल आउजाउ गर्थेँ । असोज २१ गते पनि त्यसअघि झैँ अस्पताल गएँ । डाक्टरले गोडा हेरे । एक्सरे गरियो त्यो पनि हेरे र अर्को हप्ता आउन भने । उनी हरेका साता मात्रै त्यो अस्पतालमा आउने ‘हेलमेट डाक्टर’ रहेछन् । धेरैतिर काम भ्याउनेलाई हेल्मेट भन्ने चलन छ । हेल्मेट लगायो बाइक हुँइक्याउने र काम भ्याउने भएकाले हेल्मेटको उपमा दिने गरिएको छ । असोज २८ गते अस्पताल गएँ । डाक्टर आएनन् । मलाई अलिअलि खोकी लाग्न थालेको थियो । अस्पतालमा सोधेँ डाक्टर नआउने मात्रै जबाफ पाएँ । प्लाष्टर काटेर हलुका हुने आशामा अस्पताल गएको म भारी मनले घर फर्किएँ । मनले मानेन डाक्टरलाई फोन गरेँ । फोन उठेन । फेसबुक हेरेँ । कोभिड पोजेटिभ भएको सूचना देखेँ । मलाई पनि कोभिडले भेट्यो भन्ने लख काटेँ । म गोडा भाँचिएका कारण मेरो सम्पर्क डाक्टरबाहेकसँग नभएकाले शङ्का गरेको हुँ । अरुबाट पनि सरेको हुनसक्छ । तर, मैले उपचार गराएकै अस्पतालबाट कोभिडका भाइरस मेरो शरीरमा भित्रिएका हुन् ।
कात्तिक लागेपछि ज्वरो आउन थाल्यो । साथीभाइसँग कुराकानी गरेँ । मलाई कोभिड पोजेटिभका लक्षण देखिए भनेँ । कसैले हुनसक्छ भने त कसैले मौसमी रुघाखोकी भन्ने जबाफ दिए । अहिले देशैभर कोभिड विज्ञ छन् । त्यसमा म पनि पर्ने नैँ भएँ । नजँचाइ कोभिड भएनभएको ठोकुवा गर्ने नेपाली जनको कर्म नै भइसक्यो झैं लाग्ने ! कात्तिक ६ गते स्वाब दिएँ । ७ गते लख काटे अनुसारकै पोजेटिभ नतिजा आयो । कोभिड–१९ केही होइन भन्नेका लागि मैले फेसबुक मार्फत जे पनि हो है सचेत रहौँ भनेको थिएँ । यसलाई कम आँक्नेहरू पछुताइरहेका छन् । समयमा नै सचेत बन्नेहरू मृत्युलाई जितेर घर परिवारमा खुसी बाँडिरहेका छन् । मैले पनि कम आँक्ने काम गरिनँ भने आत्तिने भन्ने त कुनै गुञ्जायस आएन । परिवारका सबैमा लक्षण देखिएकाले हाम्रो होम आइसोलेशन अघिपछिको झैं सहज रह्यो । एक्लै कुनामा थुप्रिएर बस्नु परेन ।
भाइरससँग लड्ने ठूलो शक्ति चाहिँ आत्मविश्वास हो । आत्मविश्वास बलियो हुँदा आधा रोग जितिन्छ । आराम गर्ने अर्को ठूलो औषधि हो । आहारमा विशेष ध्यान दिँदा शरीरमा शक्ति प्राप्त हुन्छ र कोभिडसँग जित्न सकिन्छ । शरीरमा प्रशस्त पानीको मात्रा पुर्याउने र शरीरलाई तातो राखिरहने गर्दा कोभिडसँग भिड्नका लागि शक्ति आउँछ । यति मात्रै होइन मैले ज्वरो आउँदा ज्वरोको औषधि, खोकी लाग्दा खोकीको औषधि खाएँ । मेरो घाँटी बन्दप्राय थियो त्यसको पनि औषधि खाने तथा कुल्ला गर्ने गरेँ । यसबाट मलाई ठूलो राहत भयो । तीन चार दिन अलि गाह्रो भएको थियो । तर, हामी आत्तिएनौँ । अहिले अवस्था सामान्य छ । स्वाब पुनः दिएको छैन । अब मेरो शरीरमा कोभिडका किटाणु समाप्त उन्मुख भएको महसुस गरेको छु ।
कोभिडको सन्त्रासका सन्दर्भमा मैले जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्र समिरसँग कुरा गर्दा उहाँले ‘सबैभन्दा बढी डराउनुपर्ने विषय सञ्चारमाध्यम हो । सञ्चारमाध्यमले झुठा समाचार प्रकाशन गर्ने गरेका छन् । म दावी गरेर भन्न सक्छु अहिले ९० प्रतिशत झुठा समाचार आइरहेका छन् । अनलाइनहरूले आफ्नो ‘भ्यूअर’ बढाउन चाहन्छन् । हामीपनि सनसनीवाला समाचार चाहन्छौँ ।’ भन्नु भएको थियो । त्यसैले समयमा नै सचेत बनौँ मिडियाको मुर्खतामा आफू चेपुवामा नपरौँ । सञ्चार माध्यमको सनसनी पूर्ण समाचारलाई पत्याएर शेयर गर्ने काम नगरौँ । कोभिडबाट त बचिएला तर त्यस्ता सञ्चार माध्यमबाट बाँच्न मुस्किल छ । कोभिड–१९ का भाइरससँग आत्तिने र मात्तिनेलाई बढी समस्या हुन सक्छ । बेलैमा सचेत बनौँ ।